ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မက်ဆင်ဂျာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁; ၁၀ နှစ် အကြာက (၂၀၁၁-၀၈-09)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မက်ဆင်ဂျာ (English: Facebook Messenger, Messenger ဟုလည်း သိကြသည်) သည် မက်ဆေ့စာပို့သည့် အပ်ပလီကေးရှင်း (Application) (အတိုကောက်: အပ်) နှင့် ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဖေ့ဘွတ်သည် တီထွင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် မက်ဆေ့ပို့သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် iOS နှင့် အန်းဒရွိုက်အတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်တွင် ဖေ့ဘွတ်သည့် မက်ဆေ့ပို့သည့် အပ်တစ်ခုကို စက်လည်ပတ်မှုစနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းအတွက် (Messenger.com) ဟူသည့် ဝဘ်ဆိုက်ကိုလည်း တည်ထောင်ထားခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖေ့ဘွတ်အပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် မက်ဆေ့စာပို့သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို သပ်သပ်စီ ခွဲခြားထားရန် ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် ထိုဝန်ဆောင်မှုများကို ဝဘ်ဆိုက်မှ တစ်ဆင့် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ရယူနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားကွက်တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်မက်ဆင်ဂျာ၌ ပါဝင်သည့် ဖီချာများကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီမှ စတင်ထည့်သွင်းပေးသည့် အချိန်အလိုက်စီကာ ဖော်ပြထားသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မရှိဘဲ မက်ဆင်ဂျာအကောင့်ဖွင့်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ Android အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မရှိဘဲ ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အီးမေလ်လိပ်စာ ရှိရုံဖြင့် မက်ဆင်ဂျာအကောင့်ကို သီးသန့်ဖွင့်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး
တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ပို့ခြင်း အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃ အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် မိမိစာပို့လိုသူနှင့် Friend ဖြစ်ထားရန် မလိုဘဲ မက်ဆေ့စာပို့နိုင်သည်။ အားလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး
Chat Heads ဧပြီ ၂၀၁၃ တခြားအပ်များ ဖွင့်သုံးနေသည့်တိုင် ပရိုဖိုင်ပုံ အဝိုင်းလေးနှိပ်ရုံဖြင့် ဖွင့်ထားသည်မှလည်း မထွက်၊ မိမိပြောလက်စ Conversation တွင်လည်း ဝင်ပြောနိုင်စေသည်။ မိုဘိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး
Calls ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် အသံဖြင့် ဖုန်းပြောနိုင်သည့် ဖီချာ ကို မက်ဆင်ဂျာတွင် စတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ကနေဒါနိုင်ငံ၌သာ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ရက်ပိုင်းအကြာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ပါ အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ဗီဒီယိုဖြင့် ဖုန်းပြောနိုင်သည့် ဖီချာ ကို သတ်မှတ်ဒေသများတွင် အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီတွင် မက်ဆင်ဂျာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၌ အဖွဲ့လိုက်စကားပြောနိုင်ရန် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာတွင် ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုပါ အဖွဲ့လိုက်ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ အားလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး
တည်နေရာမျှဝေခြင်း ဇွန် ၂၀၁၅ အခြားသူတစ်ယောက်အား မိမိဘယ်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို အသိပေးနိုင်ရန် မိမိ၏ တည်နေရာအား မျှဝေနိုင်သည်။ မိုဘိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး
လျှို့ဝှက် Conversation များ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ မက်ဆင်ဂျာအသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် မိမိမက်ဆေ့ပို့နေသည့် အကြောင်းအရာကို တခြား ဟက်ကာကဲ့သို့သောသူများ ကြားဖြတ် မရယူနိုင်ရန် end-to-end encrypted ဖြစ်သော "Secret Conversations" မှတစ်ဆင့် မက်ဆေ့ပို့နိုင်သည်။ မိုဘိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး
ရီအက်ပေးခြင်း နှင့် အမည်ခေါ်ခြင်း မတ် ၂၀၁၇ မိမိထံ ပို့လာသောစာများကို ရယ်ရသည်၊ စိတ်ဆိုးသည် စသဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်ရန် အီမိုဂျီ အနေဖြင့် ရီအက်​ပေးနိုင်သည်။ အဖွဲ့လိုက် Chat ထဲတွင် အခြားမက်ဆေ့များကြား မပျောက်သွားစေရန် မိမိမက်ဆေ့ပို့လိုသူ၏ အမည်အား @ အနောက်တွင်ထားပို့ ခြင်းဖြင့် ထိုသူထံ နိုတီတက်စေနိုင်သည်။ အားလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး
မက်ဆင်ဂျာ Rooms ဧပြီ ၂၀၂၀ လူ ၅၀ခန့် တစ်နေရာတည်းတွင် ဗီဒီယိုအနေဖြင့် စကားပြောနိုင်သည်။ အားလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး
↑ Constine၊ Josh (December 4, 2012)။ No Facebook Account Required: Facebook Messenger For Android Lets You Sign Up With Just A Phone Number။ AOL။
↑ Geron၊ Tomio (December 4, 2012)။ Facebook Messenger Takes On SMS, With No Account Needed။
↑ Constine၊ Josh (October 29, 2013)။ To Assimilate SMS, Facebook's Android Messenger Tries Letting You Reach Non-Friends By Phone Number။ AOL။
↑ Ruddock၊ David (October 29, 2013)။ Facebook Messenger Getting Major Overhaul: SMS Dead, No Longer Need To Be Friends To Send Messages။
↑ Chat Heads come to Facebook Messenger for Android။ Vox Media (April 12, 2013)။
↑ Ravenscraft၊ Eric (April 12, 2013)။ Chat Heads Come To Facebook Messenger Without Facebook Home, Regular App Updated To Prepare For Home Arrival။
↑ O'Dell၊ J. (January 3, 2013)။ Facebook now has voicemail — and voice calling in Canada။
↑ Hamburger၊ Ellis (January 3, 2013)။ Facebook tests free voice calling in Messenger app။ Vox Media။
↑ Hardawar၊ Devindra (January 16, 2013)။ Facebook quietly brings voice calls to U.S. iPhone owners။
↑ Hamburger၊ Ellis (January 16, 2013)။ Facebook launches free calling for all iPhone users in the US။ Vox Media။
↑ Constine၊ Josh (April 27, 2015)။ Facebook Messenger Launches Free VOIP Video Calls Over Cellular And Wi-Fi။ AOL။
↑ King၊ Hope (April 27, 2015)။ Facebook Messenger now lets you make video calls။ CNN။
↑ Constine၊ Josh (April 20, 2016)။ Facebook Messenger launches Group Calling to become your phone။ AOL။
↑ Kokalitcheva၊ Kia (April 20, 2016)။ Facebook Adds Free Group Voice Calls to Its Messenger App။ Time Inc.။
↑ Welch၊ Chris (June 4, 2015)။ Facebook Messenger now lets you send friendsamap with your location။ Vox Media။
↑ Swider၊ Matt (June 5, 2015)။ Your exact location can be shared in Facebook Messenger။ Future plc။
↑ Swanner၊ Nate (June 4, 2015)။ Facebook Messenger now hasamore direct way to share your location။
↑ Vincent၊ James (March 23, 2017)။ Facebook Messenger gets reactions for individual messages and @ notifications။ Vox Media။
↑ Sarconi, Paul (March 23, 2017). "Facebook Messenger Finally Makes Group Chat NotaTotal Hassle". Wired. Condé Nast.
↑ Goldman၊ Joshua (March 23, 2017)။ Facebook Messenger gets Reactions and Mentions။ CBS Interactive။
↑ O'Flaherty၊ Kate။ Facebook Users Beware: Here's Why Messenger Rooms Is Not Actually That Private (in en)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်_မက်ဆင်ဂျာ&oldid=720357" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။